Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaran'i Ashley Young Childhood Plus untold
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray izay fantatry ny anarany malaza; "Youngy". Ny tantaran-tantaran'i Ashley Young Childhood miaraka amin'ny tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahavariana avy amin'ny fotoan'androny hatramin'izao. Anisan'izany ny tantaram-piainany talohan'ny nahaterahany, ny fiainam-pianakaviana, ny fiainam-pianakaviana, ny zava-misy manokana, ny fifandraisana amin'ny fiainana ary ny fiainam-pianakaviana sy ireo zavatra tsy dia fantatra loatra momba azy.
Eny, samy mahafantatra ny fahaiza-manaony samihafa ny rehetra saingy misy vitsy no mihevitra ny mombamomba an'i Ashley Young izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, andao hanomboka.
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ashley Simon Young dia teraka tamin'ny andro 9 tamin'ny Jolay 1985 tao Stevenage, Royaume-Uni. Teraka tamin'ny kanseran'ny ray aman-dreny Jamaikana izy, ary Mrs Luther Young.
Nanatrika ny Sekoly John Henry Newman tao Stevenage ny tanora. Tany no nanombohany nilalao baolina kitra. Raha ny marina dia tanora nilalao baolina an-tsekoly niaraka tamin'ny mpamily Formula One i Lewis Hamilton, izay tamin'io taona io ihany.
Tsy lavitra ny baolina kitra izy hatramin'ny fahazazany. Teraka sy nobeazina tany Hertfordshire izy ary nanomboka ny asan'ny tanany tamin'ny taona 10 tao Watford. Izy dia lasa mpilalao voalohany tao amin'ny 2004-05 ary iray amin'ireo mpilalao manan-danja an'i Watford tamin'ny fizaràny tamin'ny 2005-06.
Mbola nanohy nilalao tsara i Watford tao amin'ny Ligy Premier, ary tamin'ny Janoary 2007 dia nafindra tany Aston Villa izy. Niorina tao amin'ny ekipa voalohany tao Villa Park izy ary nahazo ny loka PFA Young Player of Year tamin'ny 2009. Tamin'ny 23 June 2011, tanora nanao sonia an'i Manchester United ho an'ny sandam-bola tsy nekena. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Ny fiainam-pianakavian'i Ashley Young dia mifototra amin'ny vehivavy iray. Tsy misy olon-kafa noho ny fitiavany an'i Nicky Pike. Nanomboka nifankatia izy ireo tamin'izy mbola tany am-pianarana.
Vorona fitiavana roa - Ashley Young sy Nicky Pike
Ashley Young nanandrana nankalaza ny vanim-potoanan'iny antenantenany ho an'i Manchester United tamin'ny alàlan'ny fametahana ny knot miaraka amin'i Nicky Pike amam-pitiavam-pitiavana. Na izany aza, dia nisy ny nampalahelo nitranga.
Ilay mpihira Angletera dia nandao ny namana sy ny fianakaviana nahatsiravina rehefa nantsoiny ny lanonana fampakaram-bady 200,000 iray andro vitsivitsy miala ny ora manga 48 mialoha ny andro lehibe amin'ny 2011. Ny antony hiantsoana ny fampakaram-bady dia mbola tsy fantatra hatramin'izao. Na izany aza, ny fanapahan-keviny tao anatin'ny roa minitra farany dia namela fianakaviana roa nilahatra teo amin'ny hatsiaka.
Niforona i Ashley taorian'ny efatra taona taty aoriana. Nanamboatra fampakaram-bady hafa izy ary nanohy nanambady an'i Nicky Pike.
Manambady an'i Nicky Pike i Ashley Young tamin'ny farany
Samy manan-janaka roa ny mpivady roa, Tyler, zanaka sivy taona, ary Ellearna zanakavavy tanora.
Ny fianakaviana tsara tarehy Ashley Young
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -adihevitra
Tamin'ny farany 2017, Young sy allí dia tafiditra tao amin'ny tsipika 30th minitra nandritra ny fandresen'i Manchester United an'i Tottenham taorian'ny nahafatesan'i Young fa nosamborin'ny mpanohana an'i Serge Aurier izy. allí dia nirotsaka an-tsehatra ary nandeha an-dàlambe niaraka tamin'i Young talohan'ny mpilalao avy amin'ny andaniny roa dia niditra an-tsokosoko nandritra ny ampahatelony.
Ny verbals eo amin'i Young sy allí Nanohy ny tolona taorian'ny fisafoana i Jon Moss, mpitsara, nanandrana nandrava ny toe-draharaha. Takatr'ireo mpijery allí dia nampahafantatra ny taona 32-taona tokony ho izy 'miala amin'ny rindrina zimmer'. Young, izay nahazo ny Premier League, ny FA, ​​League League ary Europa League miaraka amin'ny United, dia heverina fa namaly avy amin'ny toro-hevitra allí tsy hiteny aminy tsy misy hatakandro mandra-pahazoany zavatra.
Nofaranan 'i Young ny filazana tamin'ny Alli: "Avelao aho hahafantatra hoe rahoviana ianao no nandresy an'i Prem." Azo takarina ihany koa ny fitenenana ao amin'ny tonelina taorian'ny lalao izay nankasitraka ny Young.
Young mocked allíny molotra manaraka ny lalao bitsika iray izay mivaky hoe: "Fanahy Fanahy Lehibe. Tena tsara. Lasa mora ny miresaka. "
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
RAY: Ny rain'i Jamaikana, Luther Young dia manohana an'i Tottenham Hotspur. Ny Luther dia nanala ny ankohonany ho ambony lavitra noho ny lafiny rehetra izay tokony hatolotra ny Beautiful Game.
rENY: Ny mama Jamaikana Ashley Young dia tsy manao afa-tsy ny handefa boaty ny ankamaroan'ny akoho amorom-panafody malaza nataon'i Young sy ny jamaikanina marevaka. Ao amin'ny tenin'i Young ... "Mampahatsiahy ahy ny fahazazana ilay sakafo. Faly ny manana ny mamanay sy ny lovan-draiko avy any Jamaika. Rehefa nihalehibe izahay dia tena tsara tokoa ny nihinanako. Izany dia mampahatsiahy ahy ny tantarako ".
Mbola mipetraka any atsimo ihany i Sharon Young sy ny vadiny ary i Young mihitsy no any Avaratra any Manchester.
RAHALAHY: Manana zokiny lahy (Martin Young) izay manohana ny Arsenal izy. Ny maherifony sy ny modely naseho teo an-tampony dia Ian Wright. Ary koa, Ashley koa dia manana mpilalao tanora roa mpilalao baolina kitra, Lewis Young, izay nanao ny laharana voalohany tamin'ny Watford tao 2008, sy Kyle Young, izay nampiofana tao amin'ny Akademia Arsenal tamin'ny Aprily 2009.
Eny, mety ho tanora amin'ny anaran'izy ireo, saingy ny traikefa ananan'ny fianakavianao ao amin'ny baolina dia tsy manam-paharoa. Martin Young dia 6 taona zokiny noho i Ashley. Ashley dia 4 taona efa antitra mihoatra noho i Lewis ary i Lewis dia 7 taona efa antitra mihoatra noho i Kyle.
Nanamboatra asa efa hatramin'ny ela i Lewis ary toa ny Burton, Northampton ary Crawley ankehitriny. Samy samy nahita ny nofinofiny matihanina noho ny antony samy hafa i Martin sy i Kyle. Ny quartet dia mifandray isan'andro amin'ny alalan'ny chat of Whatsapp, miaraka amin'i Lewis sy Ashley manokana noho ny fifanakaikezany amin'ny taona sy ny fiovaovan'ny fiovana farany avy amin'ny mpihetsiketsehana ho feno.
Amin'ny ankapobeny, avy amin'ny lalao ho an'i Angletera sy ny nahazoany ny lohatenin'ny ligin'ny Premier League, mba hanaparitahana azy amin'ny ligy ambany, ho an'ny fo amam-panahiniana mampihoron-koditra izay manimba ny asa alohan'ny hanombohany dia efa nahita izany ny tanora.
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -toetra
Ny kanseran'i Ashley dia manana ny toetran'ny olona zodiac;
Ny Tanjon'i Ashley Young: Tena miavaka, tsy mivadika, maneho fihetseham-po, maneho fitiavana ary mandresy lahatra.
Ny fahalemen'i Ashley Young: Moody, pessimista, mampiahiahy, manipulative ary tsy azo antoka.
Inona no tian'i Ashley Young: Hira, fialam-boly any an-trano, miala sasatra na ao anaty rano, manampy ny olon-tiany, sakafo tsara amin'ny namana
Inona no tsy tia an'i Ashley Young: Ny vahiny, izay tsikerain'i Neny, mampiseho ny fiainan'ny tena manokana.
Ashley Young Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Fandikàn-java-manidina
Ashley Young dia nofaritana ho tompon-daka amin'ny ligy voalohany. Voampanga ho nanararaotra ny gazety izy. Ankoatra izany, naneho ny heviny tamin'ny manam-pahaizana taloha i Mr. Young Alex Ferguson ary David Moyes momba ny fiankinan-doha hahazoana tombony tsy ara-drariny.
Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Ashley Young momba ny fahazazana sy ny zava-misy marina momba ny biographie. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!
Ny tantaram-pitiavan'i Mario Balotelli momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa